Dadkii ku dhaawacmay Muqdisho oo aan wali dhiig ku filan loo helin - BBC News Somali
Image caption Dad badan oo qaraxa ku dhintay lama aqoonsan karo
Soomaaliya ayaa codsaneysa dhiig lagu shubo dadkii ku dhaawacmay qaraxii weynaa ee Sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho, kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 281 qof.
Wasiirka warfaafinta Cabdiraxmaan Cismaan ayaa BBC-da u sheegay in khasaaraha dhimashada laga yaabo in ay kororto, caawinaad dheeraad ahna loo baahan yahay.
Wuxuu sheegay in in ka badan 300 oo qof lagu dhaawacay weerarkii ugu dhimasho badnaa ee Soomaaliya ka dhacay 10kii sano ee la soo dhaafay, isla markaana loo maleynayo in meydad badan ay dhismayaasha ku hoos jiraan.
Diyaarado dawo iyo gargaar kale siday oo ka kala socday Kenya, Mareykanka iyo Qadar ayaa shalay gaaray Muqdisho.
Turkiga iyo Jabuuti ayaa iyagana gargaar bini`aadannimo u fidiyay Somaaliya- diyaarad milatari oo Turkiga ayaa qaadday 40 qof oo dhaawac ah.
Dalka deriska ah ee Kenya ayaa sidoo kale qaar ka mid ah dhaawaca soo qaaday si loogu daweeyo magaalada Nairobi. Boqollaal qof ayaa dhiiggooda ku deeqayay dhaawaca.
Dad badan ayaa safaf u galay xarun dhiig lagu bixinayay oo laga sameeyay xaafadda Islii, oo loo yaqaanno Muqdishada Yar ee Nairobi.
Musiibadii ka dhacday Soobe ayaa saameyn ku yeelatay kumannaan Soomaali ah oo ku nool dalalka deriska oo qaar ka mid ah ay qaxooti ku yihiin.
Kowsar Maxamed, oo 20 jir ah, ayaa BBC-da u sheegtay in qof ay saaxiibbo yihiin ku weysay weerarka. "Aad bey ii damqineysaa. Waan isla qosli jirnay wax badan...'Allaha kuu naxariisto walaalkey."
Waxay sheegtay inay dhiiggeeda ku deeqday sababtoo ah "tani waa haddiyadda ugu weyn ee aan dadkeyga siin karo".
Wasiirka ayaa ku eedeeyay kooxda Al-Shabaab, oo xiriir la leh ururka al-Qaeda, in ay weerarka ka dambeeyaan.
Cabdiraxmaan Yariisow ayaa u mahad celiyay boqollaalka qof ee reer Muqdisho ee dhiiggooda bixiyay.
Soomaaliya ma laha baaan dhiigga lagu keydiyo, taas oo wax hoos u dhigtay dadaallada gargaarka, sida uu sheegay.
Isniintii, 165 meydad oo aan la aqoonsan karin ayaa la duugay. Waxaa jira dad gubtay oo aysan jirin si loo aqoonsado.
Koox dhalinyaro ah, oo gacan ka helaya dowladda, ayaa baraha bulshada ka bilaabay olole lacag loogu ururinayo qoysaska dhibbanayaasha isla markaana qabanqaabiyay dhiig loogu deeqayo dadka dhaawaca ah.
Dadka la aqoonsaday waxaa ka mid ahayd ardayad caafimaadka baratay oo qalin-jebin rabtay maalintii ku xigtay dhimashadeeda.
Aabbaha Maryan Cabdullaahi ayaa Muqdisho u duulay si uu uga qayb galo qalin-jebinteeda balse wuxuu taas beddelkeeda goobjoog u ahaa duugteeda.
Gaariga xamuul ayaa ku qarxay isgoys mashquul ahaa, isagoo burburiyay hoteello, xafiisyo dowladeed iyo maqaayado.
Ilaa 22,000 oo ciidan xoog badan kana tirsan Midowga Afrika ayaa ku sugan Soomaaliya kuwaas oo isku dayaya in ay dowladda ka caawiyaan la wareegidda meelaha ay maamulaan al-Shabab, oo dagaal yahannadooda ay ku xooggan yihiin inta badan dhulalka miyiga ah ee koofurta dalka.